Dib -u -eegista Onyx Apex, baajinta buuqa ugu fiican? | Androidsis
Dib -u -eegista Onyx Apex, baajinta buuqa firfircoon ee ugu fiican?
In Androidsis waxaan sii wadnaa tijaabinta dhammaan noocyada qalabka iyo qalabka casriga ah. Mar labaad waxaan awoodnay inaan tijaabino qaar ka mid ah taleefoonnada TWS ee wireless -ka ah shirkad aan nasan, Tronsmart, kan cusub Tronsmart Onyx Apex. Badeeco leh tayada saxiixa oo annaguna wax walba si faahfaahsan baannu kuugu sheegaynaa.
Waa lama huraan inaad mar hore fiirisay dhegaha -dhegaha. Cable xaqiiqdii waxay gashay taariikhda. Iyo in lagu badbaadiyo shaqada baaxadda leh ee haysashada ikhtiyaarka ugu fiican, maanta waxaan idiin soo gudbineynaa mid aad u xiiso badan. Soo -saare la garan karo oo leh taariikh dheer ayaa la soo noqda badeecad dhererkeedu ugu sarreeyo.
1 Tronsmart Onyx Apex, sameecadaha dhagaha ee aad u baahan tahay
2 Muuqaalka jirka iyo naqshadeynta Tronsmart Onyx Apex
3 Maxay bixiyaan Tronsmart Onyx Apex?
4 Shaxda Qeexitaanka Farsamada
5 Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Tronsmart Onyx Apex
Tronsmart Onyx Apex, sameecadaha dhagaha ee aad u baahan tahay
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato laakiin weli ma ogid Sida aan kuu sheegno, dhegaha -dhegaha ee laydhka leh ayaa hore u ahaa wax la soo dhaafay. Waqti aan fogeyn, sameeye kasta oo taleefan sameeya wuxuu ku daray sanduuqa dhegta ee qalabka. Wax dhawaan la waayay.
Sidoo kale, horumarinta taleefannada laftoodu waxay ka dhigan tahay in isku -xirayaasha dhagaha -dhagaha aysan had iyo jeer is -waafaqsanayn. Marka la soo koobo, maxaa waa waqtigii laga fikiri lahaa wireless -ka, iyo xulashada Tronsmart Onyx Apex ee Tronsmart ayaa ka xiiso badan. Waxaad ka dhigi kartaa middaada Tronsmart Onyx Apex on Amazon qiimaha ugu fiican.
Muuqaalka jirka iyo naqshadeynta Tronsmart Onyx Apex
Markaad fiirinayso sameecadaha dhegaha la ', waa muhiim inaad maanka ku hayso qaabka ka mid ah. Xaaladdan, Tronsmart Onyx Apex waa nooca "Dhegta" ama sidoo kale loogu magac daray "intraural". Taasi waa in la yidhaahdo, ee dhegta la soo geliyo. Wax sameeya dahaadhka iyo korodhka awoodda dhawaaqa marka la eego qaabab kale.
Waxaan helnay qaar ka mid ah dhegaha -dhegaha oo leh a cabir yar, haddii aan isbarbar dhigno moodooyinka kale xitaa shirkadda lafteeda, sida Tronsmart T6. Qaybta ka baxsan dhegta oo u qaabeysan sida “ul” qaabka AirPods Pro aad looma dheereeyo sidaa darteed waxay bixiyaan sawir caqli leh. Waan aragnaa badhtamaha bannaanka astaanta Tronsmart, midig meesha koontaroolka taabashadu ku yaal.
Sida for wax la isticmaalay dhismaheeda, waxaan ka helnaa caag dhalaalaya oo midab madow leh. Midab kaliya ayaa la heli karaa, ugu yaraan ilaa hadda. Taabo waxay u muuqdaan tayo wanaagsan oo sida uu sheegayo soo -saaraha waxay u adkaystaan ​​naxdinta iyo waqti -dhaafka. Midab u dhigma dhadhan iyo qaab kasta. Ha sugin mar dambe oo soo iibso Tronsmart Onyx Apex on Amazon wax ka yar waxaad filayso.
Qaybta ku hadhay dhegta gudaheeda ayaynu ka helaynaa qashin -qubka muranka dhaliyay. Waxaan helnaa taageerayaal iyo kuwa wax dhimaya, laakiin runtu waa taas soo -saareyaal badan ayaa doorta inay ku daraan qalabkaaga. Kuwa iyaga ka doorbida waxay xaqiijinayaan in, si fiican loo meeleeyay oo cabbir habboon, gaadho saamayn godan oo ballaadhiyo tayada codka.
Maxay bixiyaan Tronsmart Onyx Apex?
Shaki la'aan, suuqa runtii waxaa ka buuxay alaab si dhab ah isu eg, farqiga waxaa sameeya waxa ay awoodaan inay bixiyaan. Farsamada, astaamaha iyo wax kasta oo ka soocan inta kale ayaa go'aamin kara go'aanka kama dambaysta ah ee dhegeysiga gaarka ah.
Tronsmart Onyx Apex wuxuu leeyahay a hoos u dhaca buuqa jawiga ilaa 28 dB, wax dareemaya markaan isticmaalno. Tiknoolajiyadeeda ayaa taagan waxaa mahad leh chip QCC3040 horumarsan oo ay saxeexday Qualcomm oo bixinaya qalad maqal oo heer sare ah. Codku waa jilaha ugu weyn.
Isku xirnaanta, waxaan helnaa Bluetooth -ka ugu horumarsan. Waan ka hadalnaa bluetooth 5.2, taas oo la mid ah xasiloonida isku xirnaanta iyo iswaafajinta weyn ee u dhaxaysa aaladaha. Dhegaha -dhegaha qaar ku habboon isticmaalka wada hadalka telefoonka Waad ku mahadsan tahay adiga 4 makarafoon oo leh farsamada cVc 8.0 kaas oo gaara dhawaaq aad u cad oo ku saabsan wicitaanada.
Mana aha waayo -aragnimada dhegeysiga mid aad uga dambaysa. Waxay leeyihiin ku saabsan Darawallada 10mm ee caadada u ah basaska qoto dheer. Muusigga aad ugu jeceshahay, adiga oo aan lahayn buuq dibadeed oo aad dareento awoodda iyo hufnaanta codka sida aad rabto. Dalbo Tronsmart Onyx Apex on Amazon oo la socota bilaash.
Qaybta madax-bannaani Waxay sidoo kale noqotaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka go'aan laga gaarayo mid ama kan kale. Marka laga hadlayo Tronsmart Onyx Apex waxaan ka hadlaynaa madaxbannaanida ilaa 24 saacadood oo leh kiiska lacag -bixinta. Waana ku xisaabtami karnaa ilaa saacad iyo badh muusig ah oo lagu soo oogay 10 daqiiqo oo kaliya.
Shaxda Qeexitaanka Farsamada
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.2
Heerka gudbinta Mitirka 10
Kiiska batteriga 400 Mah
Batariga sameecadaha 35 Mah
Madax-bannaani madaxeed horas 5
Madaxbannaanida oo leh kiiska lacag -bixinta horas 24
10 daqiiqo oo lacag ah 1 saac isticmaalka
Badhamada jirka MAYA
Dusha taabto SI
Waqtiga ku -dallaca taleefanka madaxa horas 2
Kiiska waqtiga lacag bixinta horas 2
Caawinta kaaliyaha codka SI
Loading Dekeda Nooca USB C
Cabbirada X x 63 30.1 41.85 mm
Peso Gram 150
Qiimaha 56.99 €
Xiriirinta wax iibsiga Tronsmart Onyx Apex
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Tronsmart Onyx Apex
Teknolojiyada baajinta dhawaaqa firfircoon ka dhigaysa waayo -aragnimada dhegeysiga mid aad u wanaagsan.
Madax-bannaanida ilaa 24 saacadood adoo isticmaalaya kiiska lacag -bixinta
El xakamaynta taabashada waxay ka fiican tahay badhamada jirka iyadoo aan cadaadis la saarin dhegaha.
Baajinta buuqa firfircoon
Madaxbannaanida ilaa 24 saacadood
ka suufka caagga ah waxay wali caqabad ku yihiin isticmaaleyaal badan.
La qoto dheer bass wuxuu ka dhigayaa qaybta codka inay qaadato muhiimadda ay mudan tahay.
Bass qoto dheer
Markaan nasiib u yeelanno inaan awoodno inaan isku dayno sameecadaha dhegaha, waayo-aragnimada Waxa ay na siiyaan ayaa muhiim u noqon kara kuwa akhriya maqaalladan iyagoo raadinaya xog sugan oo ka caawisa inay go'aan ka gaaraan hal ama nooc kale. Xaaladdan waa inaan ka hadalnaa baajinta buuqa firfircoon oo sidee tahay Calaamadee farqiga gabi ahaanba kuwo kale oo badan oo aan suuqa ka helno.
Dib u eegida: Rafa Rodriguez Ballesteros
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib -u -eegista Onyx Apex, baajinta buuqa firfircoon ee ugu fiican?
Sida loo abuuro emayl kumeel gaar ah PS4 iyo PS5 oo loogu raaxeysto PlayStation Plus lacag la’aan